Shaki iyo su’aalo ku gadaaman dilkii Cabdicasiis Afrika | KEYDMEDIA ONLINE
Howl-wadeenno ka tirsan warbaahinta qaranka, ayaa KON, ugu warramay in shaqsi ka tirsan Wasaarada Warfaafinta, uu wax yar 10 daqiiqo ka hor qaraxa uu ka haray gaariga uu la socday Africa, taas oo loo fasiran karo qorshe maleegan oo dhinacyo kala duwan hagayeen.
MUQDISHO, Soomaaliya – Tododaad ayaa ka soo wareegtay geerida Allaha u naxariistee, Agaasimihii Radio Muqdisho, Cabdicasiis Maxamuud Guleed [Afrika], kaas oo 20-kii bishaan lagu dilay qarax Is-miidaamin ah, oo ka dhacay caasimadda.
Tan iyo xilligaas, ma jiro wax baaritaan ah oo ay kiiska khaarijinta Cabdicasiis Afrika, ku sameyeen laamaha ammaanka ee dowladda federaalka, kuwaasoo uu muddo gacan ka siinayay la dagaallanka Kooxda Al-Shabaab.
Afrika, oo loo aqoonsan yahay, inuu ahaa, wariyaha ugu saameynta badan warbaahinta qaranka, tan iyo markii dib loo howl-galiyay, ayaa duco iyo tacsi ka waayay xaafiiska Farmaajo, taas oo siyaadisay shakiga ay dadka qaar qabaan ee ah in khaarijintiisa ay gacan ka geysatay Madaxtooyada.
Sida ay ogaatay Keydmedia Online, ugu yaraan saddex kaamiro [CC Camera], oo ay leedahay hay’adda NISA, ayaa ku xiraan aagga goobta lagu bartilmaameedsaday wariyaha, waxaana dib u daawashada muuqaalka ay duubtay Kaamirada laga hor istaagay saraakiil sare oo iskood isku xilqaamay.
Howl-wadeenno ka tirsan warbaahinta qaranka, ayaa KON, ugu warramay in shaqsi ka tirsan Wasaarada Warfaafinta, uu wax yar 10 daqiiqo ka hor qaraxa uu ka haray gaariga uu la socday Afrika, taas oo loo fasiran karo qorshe maleegan oo dhinacyo kala duwan hagayeen.
Sida ay xoguhu caddeeyeen, Allaha u naxariistee, Cabdicasiis, ayaa xurunta Raadiyaha kaga tagay gaarigiisa, wuxuuna la socday gaari aan hore inuu raaco looga baran, waana mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee abuuraya su’aalaha la xariira kiiskaan.
“Al-Shabaab, sidee ku ogaadeen in Afrika u socday maqaaxida lagu hor khaarijiyay? Sidee ku ogaadeen in gaarigiisa uu ka soo tagay oo mid uusan waligiis raacin u soo qaatay”? Ayuu yiri sargaal ka tirsan nabad sugidda gobolka oo KON u warramay.
Wuxuu is weydiiyay, xilliga qofka is qarxiyay la geeyay goobta qaruxu ka dhacay, maadaama AUN, Afrika, uusan hore uga casheyn jirin maqaaxida lagu hor dilay.
“Waxaan rumeysanahay, in qofka is qaxiyay, isla daqiiqadahaas goobta lagu keenay gaari ka mid ah kuwa aqoonsiga wata ee ciidamada ammaanku aysan ka shikin, isla-markaana, marxuumka la wiideysanayay in muddo ah, waxaa kiiskaan fududeyn karay qof ka mid ah shaqaalaha dowladda oo wax yar ka hor qaaxa ka tagay wariyayaasha la beegsaday”. Ayuu yiri, sagaal kale, oo ka tirsan isla gobolka.
Cabdicasiis Afrika, wuxuu agaasime ka ahaa Radio Muqdisho, halka Sharma’arke Maxamed Warsame, oo dhaawac ah, uu agaasime ka yahay Telefishinka Qaranka Soomaaliya [SNTV], kuwaas oo bishii September, ee sanadkaan laga mamnuucay, wareegtooyinka sharci-darrada ah ee ka soo baxa xaafiiska Farmaajo.
Al-Shabaab, 13 sano ayaay baadi goobayeen Afrika, ma aysan helin, oo waqtigiisa ayaa wax ka dhimanaa, hayeeshee, maxaa geeridiisa ku soo aaddiyay xilli uu laba bil ka hor Farmaajo ka hor istaagay inuu warar xasarado ka abuuri kara ka sii daayo warbaahinta qaranka?”. Ayuu sidoo kale, yiri, mid ka mid ah wariyaashii muddada dheer la soo shaqeynayay marxuumka.